Orinasa mpamatsy gazy NDIR, mpamatsy - Mpanamboatra siny Gas NDIR
Dual Channel NDIR Sensor Methane (CH4) Detectible Gas Detector-SDG11DF33
Ny fianakavian'i SDG11DF33 manana sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrared) dia sensor thermopile fantsona misy fantsom-pifandraisana izay mifanitsy mivantana amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra. Ny fantsom-pahalalana dia manome onitra ny fepetra rehetra azo ampiharina.
ASIC AFE Integrated Dual Channel NDIR Infrared CH4 Sensor ho an'ny Sensor Gas Flammable-SDG11DF33G1
Ny fianakaviana SDG11DF33G1 manana sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrared) dia sensor thermopile fantsona misy fantsom-pamokarana izay mifanitsy mivantana amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra. Ny fantsom-pahalalana dia manome onitra ny fepetra rehetra azo ampiharina.
Single Channel Methane (CH4) NDIR Gas Sensor ho an'ny Detector Leak Gas voajanahary sy Meter-SSG11DF33
Ny fianakavian'i SSG11DF33 manana sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrared) dia fantsom-panafody thermopile fantsona iray izay manana herinaratra famantarana fivoahana mifanaraka amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra.
Loharanom-pahazavana IR ho an'ny Detector Sensor Gas Thermopile Infirared NDIR
Ny IR Light Source dia karazana jiro jiro, ny fonony manokana fitahirizana fitaratra
mampita hazavana infrared. Ampiasaina be amin'ny famandrihana entona infrared. Ny savaivony farany ambany an'ny
IR Light Source dia 3.18mm, ary ny faharetan'ny modulasi dia mety hahatratra 3 Hz.